Abenzi baseChina Head and Neck Pack nabaphakeli | Zhancheng
Ikhwalithi ephezulu nokunamathela kwepakethe elihlinzekiwe lokuhlinzwa & ama-drapes kuyindlela ekahle yalo lonke uhlobo lokuhlinzwa. Lezi zisetshenziswa kakhulu ezibhedlela ezahlukahlukene ngenkathi kwenziwa imisebenzi ukuhlinzeka ngenduduzo egumbini lesibhedlela. igazi, uketshezi lomzimba kanye nokukhishwa kweziguli, okunokutheleleka okungaba khona, kungavinjelwa ngempumelelo ukuvimbela ukutheleleka kwamagciwane
Iphakethe lethu lokuhlinza eliyinyumba elilahlwayo elilahlwayo lisetshenziselwa ukuvikela isikhathi esisodwa ngesikhathi sokuhlinzwa kokubeletha sowesifazane esibhedlela. Yenziwe ngezinto ezidingekayo ekusebenzeni ezingavimba ngempumelelo ukungena ketshezi kanye nokwamagciwane futhi kuvimbele ukutheleleka okuphambene. Ukwakheka okuthile kungakhethwa futhi kumiswe ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Iphakethe lokuhlinza eliyinyumba lokuzala eliyinyumba linezinzuzo zokumunca okuqinile, ukwenqatshwa kokungcola kanye nokungena komoya okuhle, okungangena kuyo yonke imfucuza ekusetshenzisweni kwesiguli ngasikhathi sinye futhi kuqede ngempumelelo ukutheleleka okuphambene.
1, Kulula ukuyisebenzisa, ukusetshenziswa kwesikhathi esisodwa, ngaphandle kokusebenzisa kabusha nokuhlanza;
2, Hlangana nezidingo zemvelo, kulula ukwehlisa isithunzi noma ukushisa;
3, Ukusetshenziswa kwempahla eluhlaza esezingeni eliphakeme, akukho ubuthi, akukho ukuchitheka kwefayibha, nezinga eliphakeme lokumelana namagciwane. Ngezimpawu zokumelana ezintathu: anti-alcohol, anti-static, anti-plasma;
I-4, Izingxenye ezibalulekile zinezakhiwo ezingangenwa uketshezi nezingavumeli uketshezi, futhi zingalungiswa ngezikhwama zokuqoqa uketshezi;
5, Ngokuvikela ukuvimbela ukutheleleka okuthe xaxa ezibhedlela, ukunciphisa izindleko ezifihliwe zokwelashwa, nokwandisa ukulawula izinga lokutheleleka;
6, umphumela wokuvala inzalo unokwethenjelwa, futhi isikhathi sokuvala inzalo sinde;
Ithawula Lesandla (30 × 34cm)
Ijazi elijwayelekile lokuhlinzwa (125 × 150cm)
Ingubo Yokuhlinza Eqinisiwe (125 × 150cm)
I-Head Drape (100 × 100cm)
Yesigcilikisha Yesigcilikisha (130 × 115cm)
Suture Bag (16 × 29cm)
Ikhava Yethebula Lensimbi (150 × 190cm)
I-Mayo Stand Cover (80 × 145cm)
Imaski Yobuso BeMidiya
Isandla Tower (40 × 40cm)
Kwagcizelelwa ingubo Yokuhlinza
Ikhava Yethebula Lensimbi
Ikhava Yesitsha Yensimbi
I-Medical Drape (i-Hip Drape)
Hole Drape (amadolo)
Hole Drape (isandla)
Iphakethe Lokuhlinzwa Kwe-Hip
Izinto Zokunamathela (10 × 50cm)
Ingubo kuhlinzwa (kwagcizelela)
UMark Mark Pen
Langaphambilini Iphakethe le-Cesarean
Olandelayo: Iphakethe le-Ophthalmology
Iphakethe Lokuhlinzwa Okujwayelekile
Amaphakethe Okuhlinza Oyinyumba
Amaphakethe Enqubo Yokuhlinza